By Tachileik News Agency - March 25, 2010
စိတ်ကို အစွဲြပုြပီး​ အြကိုက်ဆံုး​ေတွကို ကိုလင်း​ညိုြကီး​က ​ေမး​ြမန်း​သဖွယ် တဂ်ထား​တာ​ေြကာင့်​၊​ ​ေခါင်း​ကုတ်အ​ေတွး​ဝင် ကိုယ်ကိုတိုင်က ဘာ​ေတွြကိုက်လဲဆိုတဲ့​ အမည်တပ်မှတ်ထား​တဲ့​ ပစ္စည်း​ေတွကို စဉ်း​စား​လိုက်​ေတာ့​။ အ​ေတွး​ေတွထဲမှာ ​ေပါ်လာတာ အများ​ြကီး​ပါပဲ....၊​
ကွန်ပျူတာ ကိုြကိုက်တယ်၊​ ကွန်ပျူတာသမား​ြဖစ်ြပီး​ ကွန်ပျူတာကို မြကိုက်ရင် ​ေလာင်​ေြပာင်ဖွယ်ြဖစ်​ေနလိမ့်​မယ်၊​ တစ်ကယ်​ေြပာရရင်လည်း​ ကွန်ပျူတာကို ြကိုက်တယ်၊​ ကွန်ပျူတာက ကျွန်​ေတာ့​ရဲ့​ အနွံအနာကိုခံနိုင်တယ်​ေလ၊​ ပိုြကိုက်တာက သူ့​ကို ​ေတာ်​ေတာ်ခိုင်း​လို့​ရလို့​...
ပိုက်ဆံကို မလိုအပ်​ေသာ ဟိုး​လွန်ခဲ့​ေသာ နှစ်များ​စွာက ​ေကျာက်​ေခတ်လူသား​ေတွဆိုရင် ပိုက်ဆံကို မလိုြကဘူး​၊​ ​ေနာက်ြပီး​ ​ေရှး​မလွန်မ​ေနှာင်ခင် ​ေခတ်​ေတွစီကလည်း​ ပိုက်ဆံကို မသံုး​ြကဘူး​၊​ အဲ့​ဒီတုန်း​က ပိုက်ဆံဆိုတာ မ​ေပါ်​ေသး​ မထုတ်လုပ်​ေသး​ေတာ့​၊​ ပစ္စည်း​အလှဲအလှယ် နဲ့​ပဲ လုပ်ြကတယ်၊​ ဆီ​ေပး​ ဆား​ရ။ အသား​ေပး​ ဆန်ရ ဆိုသလို​ေပါ့​...။ အရင်​ေခတ်နဲ့​ မတူတဲ့​ အခု​ေခတ်​ေတာ့​ ပိုက်ဆံဆိုတာြကီး​ရှိ​ေနမှ ြဖစ်မယ်လို့​ြမင်ပါတယ်၊​ ပိုက်ဆံက ဒုတိယဘုရား​သခင်တဲ့​ ဒါ​ေြကာင့်​ ပိုက်ဆံကို ြကိုက်ပါတယ်။
စိတ်​ေလစိတ်ညစ်တဲ့​အခါ သံစဉ်​ေတွကို မညီမညာစွာနဲ့​ ​ေလျှာက်တတ်တီး​ြဖစ်တယ်၊​ ြဖစ်ြဖစ်​ေြမာက်​ေြမာက်​ေတာ့​ မတီး​တတ်။
ဘယ်ြမို့​ကို ​ေရာက်​ေရာက် ဘယ်​ေဈး​ကို​ေရာက်​ေရာက် အရင်ဆံုး​ြကည့်​မိတာက​ေတာ့​ စာအုပ်ဆိုင်ပါပဲ၊​ စာအုပ်ဆိုရင် စု​ေဆာင်း​တာ ဝါသနာအလွန်ပါ၏
လက်တ​ေလာကိုင်တဲ့​ ဖုန်း​က Nokia ​ေလး​ပါ၊​ အဲ့​ဒီဖုန်း​နဲ့​ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ြပီး​ အခုလို့​ တဂ့်​ပိုစ့်​ကို ​ေရး​လိုရ၊​ ​ေလ့​လာစရာ​ေတွကို ​ေလ့​လာရတာ​ေြကာင့်​ သ​ေဘာကျနှစ်သက်မိတယ်၊​
ကိုယ်ပိုင်အ​ေနနဲ့​ ပိုင်ဆိုင်ထား​သမျှကို နှစ်သက်မက်​ေမာ သ​ေဘာကျပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာ လိုချင်တာက​ေတာ့​ ကင်မရာတစ်လံုး​ေလာက်​ေပါ့​၊​ ဓါတ်ပံုရိုက်တာကိုလည်း​ အလွန်ြကိုက်တယ်၊​ အရိ်ုက်ခံတာနဲ့​ သူများ​ကိုရိုက်​ေပး​တာဆိုရင်​ေပါ့​၊​ ရိုက်​ေပး​တာကို ြကိုက်တယ်.....။
ကိုလင်း​ညိုြကီး​ ကျွန်​ေတာ် လက်ရှိသံုး​ေနတာထဲက ြကိုက်တာ​ေတွကို ​ေရး​လိုက်ပါ​ေြကာင်း​၊​
​ေမာင်မိုး​ March 25, 2010 at 7:26 PM
အမျိုး​သား​ေတွအား​လံုး​က​ေတာ့​ အြကိုက်ချင်း​တူတယ်ဗျာ..။ ကို​ေဇာင်း​က ထိုင်း​မှာလား​။ ​ေရွှမျက်မှန်ြကီး​ေတွ့​လို့​။
အိမ် March 25, 2010 at 10:13 PM
လတ်တ​ေလာ သံုး​ေနတဲ့​ မိမိခန္ဓာြကီး​ကို မြကိုက်ဘူး​လား​ဗျ ..... ????????
​ေဇာင်း​ March 25, 2010 at 10:21 PM
စိတ်စမ်း​ေရ March 26, 2010 at 5:52 AM
အင်ြကင်း​သန့်​ March 28, 2010 at 3:45 PM
​ေဇာင်း​ရဲ့​ အြကိုက်​ေတွကို စပ်စုသွား​ပါတယ်...